Mpampinono: Fantaro ary isao ny orinasa B2B mitsidika ny tranokalanao | Martech Zone
Mpampinono dia tranonkala iray izay mampitombo ny fahaizanao mivarotra amin'ny fampifangaroana ny angona varotrao sy ny varotra, ahafahan'ny orinasanao mahita orinasa vaovao sy hanara-maso ireo mpanjifa efa tonga ao amin'ny tranonkalanao. Ny fanondroana dia miaraka amina tahiry angon-drakitry ny mpiasa ahafahanao mahita ny mailaka sy ny mombamomba ny mpanapa-kevitra ao amin'ny fikambanana. Ity dia fitaovana tsara ho an'ny orinasa B2B satria afaka mamantatra ireo mpitsidika tsy fantatra anarana izay manana fikasana hividy.
Fantaro ireo Prospect ABM mitsidika ny tranokalanao
Anisan'ny an Marketing amin'ny kaonty Paikady (ABM), fitaovana mahafinaritra ity. Rehefa mikendry, manao dokambarotra, na mampiroborobo ny vokatrao sy ny serivisinao amin'ny orinasa manokana ianao dia azonao atao ny mampandre ny mpiasan'ny varotrao rehefa mitsidika ny tranonkalanao ireo orinasa ireo ary mahita ny toerana ifandraisan'izy ireo amin'ny tranokalanao. Ny Leadfeeder dia ahafahanao mampifangaro ny lisitry ny kaontinao amin'ny Leadfeeder, manendry rep, ary mahazo fampandrenesana raha vantany vao mitsidika ny tranonkalanao izy ireo. Ny ekipan'ny varotrao dia afaka manaraka akaiky ilay tanjona.
Mampiasa LeadFeeder amin'ny fizotry ny varotrao
Ny fampiasana fitaovana toa an'io dia mety hampitombo ny fifantohan'ny ekipa mpivarotra anao amin'ny vinavin-java-kendrena avo lenta ho an'ny vokatra sy serivisin'ny orinasanao. Miaraka amin'ny Leadfeeder sy ny sehatra CRM na ABM anao dia mety toa izao ny fizotry ny mahazatra:
Tonga ny mpitsidika tsy fantatra anarana amin'ny tranokalanao.
Miorina amin'ny sivana orinasa sasany napetrakao na lasibatra ABM izay nampifandraisinao, dia ampandrenesina ny solontenanao ny varotra ny amin'ilay hetsika.
Raha tsy manao ABM ianao, ny ekipan'ny varotrao dia afaka mijery ny orinasa ary mamantatra raha vinavina izany na tsia mifototra amin'ny mombamomba ny orinasany.
Raha vinavina izany, ny solontenan'ny varotrao dia afaka mijery ireo fifandraisana ao amin'ilay orinasa ao aminy Mpampinono hamantatra hoe iza no mpanapa-kevitra ao amin'ny orinasa hifandraisany.
Afaka mandefa mailaka avy hatrany avy amin'ny sehatra marketing mailaka tafiditra ianao, na ny mpivarotra anao dia afaka mandefa naoty manokana na manao antso fanampiana na manangana antso varotra.
Misy endri-javatra mitarika amin'ny mpampinono
Mifandraisa amin'ny Insights - Leadfeeder dia manolotra fidirana amin'ny tobim-pifandraisana mahery vaika ho anao. Afaka manomboka resadresaka kely ianao izao.
Score firaka mandeha ho azy - Ny fitarihanao mafana indrindra dia apetraka eo an-tampon'ny lisitry ny lisitry anao mba hahafantaranao izay hampifantohana ny sainao manaraka.
Generator mitarika eo noho eo - Ny tracker anay dia manosika data hatrany isaky ny 5 min! Manome anao onja tsy tapaka ny fotoana hanarahana azy ireo raha vantany vao miditra izy ireo.
Fanairana mailaka anao manokana - Rehefa mitsidika ny tranonkalanao ny orinasa manokana dia hampandrenesina amin'ny alàlan'ny mailaka ianao izay midika fa afaka manaraka ny fotoana lavorary ianao.
Automation amin'ny CRM anao - Rehefa avy nampifandray ny iray amin'ireo fampidiranao CRM marobe, na Slack, amin'ny Leadfeeder ianao dia mipetraha rehefa mandefa fitsidihana vaovao ny fantsom-pivarotana anao izahay.
Mpampiasa maimaim-poana - Ampio mpampiasa betsaka araka izay itiavanao azy ary ampiasao ny fitaovana fitantanana fitarihana Leadfeeder miaraka, mba tsy hanadino fitarihana hafa amin'ny Internet ny orinasanao.
Fikarohana mahery - Mitadiava orinasa any amin'ny Leadfeeder ary jereo ny tantarany fitetezana feno mba hahazoanao sary feno momba ny zavatra mahaliana azy ireo.
Fanivanana miovaova - Mamorona sy mitahiry karazan-tsakafo matanjaka rehetra toy ny orinasa amin'ny firenena iray, fampielezan-kevitra amin'ny AdWords na amin'ny pejin-tranonkala iray.
Leadfeeder dia mifangaro amin'ny Pipedrive, Mailchimp, Salesforce, Hubspot, Zoho, Zapier, Microsoft Dynamics 365, Slack, WebCRM, G Suite, Google Data Studio, ary Google Analytics.
Manomboha fitsapana maimaim-poana mandritra ny 14 andro amin'ny mpampinono
Fampahafantarana: Mampiasa rohy mpiara-miasa izahay Mpampinono ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: varotra miorina amin'ny kaontyGoogle Analyticsstudio data data googlegsuitehubspotmpampinonomailchimpdinamika microsoft 365PipedrivesalesforcehiahotrahoranareoWebCRMzapierZoho